Signature ဘယ်လိုထားမလဲ ? - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Signature ဘယ်လိုထားမလဲ ?
ခုကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ signature ထားချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာရှင်းပြပေးပါမယ်။ နောင် ဖိုရမ်မှာ အသင်းဝင်တွေ များလာတဲ့အခါ Bandwidth လို့ခေါ်တဲ့ ဖိုရမ်အ၀င်အထွက် ၊ ဖိုရမ်မှာလျှောက်ကြည့်တာ ၊ ဒေါင်းလုဒ်ချတာ တွေအားလုံးကို လိုက်မှတ်ပြီး ကုန်ကျတဲ့ Megabyte တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုဒ်အတွက်ပေးထားတဲ့ limit ထက်ကျော်သွားရင် ပုလဲနက်ဖိုရမ် ဖြစ်သလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆာဗာမှာက disk space ကအလွန်နည်းပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ပုံတွေအားလုံးကို ဆာဗာပေါ်မှာ လက်ခံမသိမ်းပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အားလုံးပဲ အခြားနည်းလမ်းကို ပြောင်းသုံးကြရအောင်ပါ။ ခုကျွန်တော်က ဒုတိယနည်းကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။
၁။ ဖိုရမ် Home Page မှာရှိတဲ့ မြှားပြထားတဲ့ " User CP " ကိုသွားလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးတာနဲ့ User CP မှာ " Edit signature " ဆိုတာရှိပါတယ်။ Click လိုက်ပါ။
၃။ Edit Signature မှာ ခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စာလေးတွေလဲ ရေးလို့ရပါတယ်။ Emotion လေးတွေလည်း ထည့်လို့ရပါတယ်။
၄။ ခု www.imageshack.us ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ပါမယ်။ရောက်တာနဲ့ Browse ကိုနှိပ်ပြီး သင့်စက်ပေါ်ကနေ သင်တင်ချင်တဲ့ ပုံလေးကိုသွားရွေးလိုက်ပါ။
၅။ ပြီးတာနဲ့ Open ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပေါ့။
၆။ ပြီးရင် Host it ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာ မြှားပြထားပါတယ်။
၇။ ပုံကို upload တင်တာပြီးရင် လင့်ခ် တွေပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီ့အခါကျရင် အောက်က ပုံမှာပြထားတဲ့ လင့်ခ် ၄ ခုထဲက အောင်ဆုံးလင့်ခ် ( Direct link to image) ကို ကော်ပီလုပ်ပါ။
၈။ ပြီးရင် ဖိုရမ်ကိုပြန်လာ ၊ ဖိုရမ်က ခုန Edit signature မှာ သင်ယူလာတဲ့ လင့်ကို paste ချပါ။ ပြီးတာနဲ့ အဲဒီ့လင့်ရဲ့ ရှေ.ဆုံးလေးမှာ [img] ဆိုတာလေးနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ [/img] ဆိုတာလေး တွေ ထည့်ပေးပါ။ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါကို BBCode လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူက သင့်ရဲ့ အခြားဆိုဒ်က ပုံတွေကို ဒီဖိုရမ်ပေါ်မှာ ဆွဲယူပြပါလိမ့်မယ်။
၉။ ပြီးတာနဲ့ Save signature ကို click လုပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားပါတယ်။
၁၀။ အဲဒါပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ signature မှာ ခုလိုမျိုး ပုံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုလုပ်ပြီးမှ signature မပေါ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့။ User CP က Edit Option မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပို့စ် လုပ်တဲ့နေရာရဲ. အောက်နားမှာဖြစ်ဖြစ် Show signature ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒါကို check ( အမှန်ခြစ် ) လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ ပို့စ် အသစ်တစ်ခုတင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့် Signature လေး အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Last edited by Aung Aung; 17-03-2009 at 10:50 PM..
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, သောကမဲ့မိုးတိမ်, မြန်အောင်သား, aungphyo, layatecho, new-comer^girl, phoetharlay, thamadi, wewelay, wunna313, zo
Re: Signature ဘယ်လိုထားမလဲ ?
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, phoetharlay, zo
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုရဲနောင်ရဲ့ Help ရေးထားတာလေးကို ပိုပြီးသဘောကျမိတယ်ဗျာ . .
ံHot Linking လုပ်တာက ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ . .
လက်မခံတဲ့ ဆိုက်တွေကနေ မလုပ်မိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် . .
http://www.imageshack.us/ လေးလဲ Hot Linking ရပါတယ်ခင်ဗျာ . . Signup လုပ်စရာမလိုပါဘူး . File size limit 1.5 MB; File types allowed: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, swf (Flash) ဖြစ်ပါတယ် . .
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-08-2007, 06:47 PM
Last edited by နယ်သူ; 13-08-2007 at 07:09 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နယ်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, ocen, zo
တည်နေရာ:ှုInsein, Yangon
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Signature ဘယ်လိုထားမလဲ ?
အခု ဖိုရမ်က မြန်မာလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့
user CP ဆိုတာက ဘာကိုပြောမှန်းကို မသိတာ
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ငွေလ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, zo
Find More Posts by ငွေလ
အဲဒါ ယခုလက်ရှိ ပြင်ဆင်ရန် ဆိုတဲ့ နေရာကို ပြောတာပါ ... အဲဒီမှာ အကုန်ပြင်လို့ရပါတယ် ...အဆင်ပြေပါစေ ...
[COLOR="Magenta"]အတိတ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့ ပဲရမယ်။ဖျောက်ပစ်လို့မရတော့ ....
မနက်ဖြန်မှာ အတိတ်ဖြစ်မယ့် ဒီနေ့ကို သတိရချင်စရာလေးတွေပဲ ဖြစ်ချင်တယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ငွေလ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, aungphyo, zo
ငါဟဲ့ ငွေလ... 18 18:
ကိုကမ်းသာယာ နဲ့ မသီတာညို
ကျွန်တော် ရဲ့ ထိုးမြဲလက်မှတ်ကပုံလေးကို ဖိုရမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပုံတွေမသုံးဘဲ ကျွန်တော် PC ထဲမှာရှိတဲ့ ပုံလေးတွေကို ထည့်တာ Action ပါတဲ့ GIF File လေးတွေ လှုပ်အောင်ဘယ်လိုတင်ရမလဲခင်ဗျား...
Last edited by tu tu; 09-05-2008 at 09:46 AM.. Reason: ခေါင်းစဉ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ akaris အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြင်ဆင်ရန်အောက်က ထိုးမြဲလက်မှတ်ပြင်ရန် မှာနည်းလမ်း(၂)မျိုးနဲ့ ပြင်နိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း(၁)သုံးရင် image hosting တင်ပြီးရလာတဲ့ direct link ကိုထည့်ရပါမယ်။
နည်းလမ်း(၂)သုံးရင် ကိုယ့်computer ကနေ browse လုပ်ပြီးထည့်ရုံပါပဲ။
ပြီးရင်“သိမ်းမယ်”ကို click ပါ။
Your Current Signature Picture အောက်မှာ ပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Insert Signature Picture ကို click ပါ။
ပြီးရင် “သိမ်းမယ်” ကို click လိုက်ရင်ရပါပြီ။
insert image button ကိုနှိပ်ပြီး direct link ထည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်။
gif image သာထည့်လိုက်ပါ။ သူ့အလိုလို လှုပ်ပြီးသားရပါတယ်။
ပုံဆိုဒ်မှာ 300*120 pixels ထက်မကျော်ရ ၊ 1.00 MB ထက်မကျော်ရပါ။
Last edited by tu tu; 09-05-2008 at 09:47 AM..
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, phoetharlay, thamadi, zo
ကျွန်တော်ပထမတင်တဲ့ ပုံက 300*120 pixels ထက်ကျော်သွားလို့ အဆင်မပြေတာ..
အဆင်ပြေသွားတယ် ကြားသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိုက်တယ် ပုံလေးကကြက်ပေါက်စလေးက ကြောက်လို့ထင်တယ် ပြန်ပြန်ဝင်သွားတယ်။
ကျန်တော့ နာမည် လေး အခုမှ ပုံလေးနဲ့ ခန့်ခန့် ညားညား လေးဖြစ်သွားတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ရှင်နေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Signature မှာစာသားလေး ကို ရွေ့လျားနေတာလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရော ဘာကုဒ် သုံးရမလဲမသိဘူး ...
ဘေးဘယ်ညာရွေ့လျားနေတာမျိုးပါ ..Marquee လို့တော့ထင်တာပဲ ..ကုဒ်ကိုမသိလို့ပါ ...မေးတဲ့နေရာမှားနေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ ....
[Marquee][SIZE="5"][COLOR="DarkGreen"]အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော[/COLOR][/SIZE][/Marquee]
Last edited by bothu; 15-12-2008 at 06:22 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ bothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by bothu
13-12-2008, 06:20 AM
ဟုတ်။ အကိုပြောတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ [marquee] tag ၂ ခု ကြားထဲ အကိုရွေ့စေချင်တဲ့စာလုံး ထည့်ရမှာပါ။ အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ခင်မျိုးစစ်, စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, နိုဝင်ဘာ, bothu, zo
ထိုးမြဲ လက်မှတ် lehonchan Applications 11 30-01-2010 10:09 AM